Maamulka KG oo sheegay in ay caruur ka soo furteen Al Shabaab – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaamulka KG oo sheegay in ay caruur ka soo furteen Al Shabaab
Maamulka Koofur galbeed ayaa ka warbixiyay caruur ay sheegeen in Al-shabaab ay Askareen rabeen oo ay ka soo furteen.
Waxaa caruurtaas la geeyay xero ciidan oo dhaqan cilin loogu sameynaayo oo ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Afhayeenka Maamulka Koofur Galbeed Nuurdiin Yuusuf Abuukar ayaa sheegay in Al-shabaab ay ka soo furteen 5 caruur ah oo da’adooda ay ka yartahay ilaa 15 sanno.
Nuurdiin ayaa tilmaamay in caruurtaas Al-shabaab ay ka wateen duleedka magaalada Baydhabo isla markaana ay geeyeen deegaanka Labaatan Jirow oo dhan koofureed kaga beeggan magaalada Baydhabo halkaas oo ay ku taba barayeen caruurtaasi.
Ugu dambeyn, Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shaaca ka qaaday in aysan u dulqaadan doonin in Al Shabaab caruurta ay askareeyaan.
Ilaa iyo hada majiro wax hadal ah oo ka soo baxay Al Shabaab oo ku aadan warkii ka soo yeeray Maamulka Koonfur Galbeed.
41,180 total views, 1,933 views today
41,180 total views, 1,933 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,252 total views, 1,932 views today
41,252 total views, 1,932 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,264 total views, 1,932 views today
41,264 total views, 1,932 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,288 total views, 1,932 views today
41,288 total views, 1,932 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,316 total views, 1,929 views today
41,316 total views, 1,929 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]